Izithelo ezomileyo zokulahleka kwesisindo
Ekubeni amaxesha amandulo anomileyo izityalo ziyimveliso eyaziwayo neyuncedo. Ngoku oomama abakhethiweyo bayilungisa ubusika bemihlaba yeeperele kunye namaapulo, kwaye kwiindawo zokuthengisa unokuthenga amakhiwane, iziqhumane, ama-apricot omisiwe, imihla. Unokhetho olubanzi, kunene? Kwi-compote yezithelo ezomileyo iqulethe ixabiso elininzi lezondlo kunye neivithamini zendalo. Izityalo ezomileyo zilungele umzimba wonke, kwaye ezininzi zazo zichaphazela umsebenzi wamathumbu.
Abafazi be-idevushki abalandela umzobo wabo, bakhethe izithelo ezomileyo, benqatshelwe i-buns kunye ne-chocolate bars. Ngexesha elifanayo, izityalo ezomileyo ziyimveliso ephezulu yeekhalori - i-carbohydrates ecocekileyo. Ngoko kutheni iingcali zondlo zicebisa iidyuzi endaweni yokutya izityalo ezomileyo?
Kuvela ukuba ziqukethe i-fructose eninzi, i-glucose kunye ne-hexose, kodwa kukho ishukela kakhulu kubo.
Ngaphezu koko, izityalo ezinomileyo aziqukethe amafutha, kodwa zizityebi kwiiminerali ezixhamlayo kunye neemaminerali - ziphindwe ngamaxesha angama-4-5 kuneziqhamo eziqingqiweyo eziqhelekileyo. Umthombo ongapheliyo wamavithamini (ngokukodwa iqela B kunye ne-carotene) kunye ne-fiber, ngoko ke luncedo kwaye luncedo.
Oogqirha, izondlo zithi xa usebenzisa izityalo ezomileyo ngobuncinane, banciphisa ukutya kwakho. Ukuba ufuna ukubulala isondlo, ngoko kufuneka udle ezimbalwa zee-apricot ezomileyo, umhla okanye olunye uhlobo lwezityalo ezomileyo uze uphuze nje ngamanzi. Awuyi kuphelisa kuphela indlala, ngokunjalo unike nomzimba izinto ezincedo. Kodwa musa ukulibala ukuba kukho ezininzi iikhalori kwiziqhamo ezomileyo. Ngako oko, ukuzitshabalalisa ngokukhulu kakhulu akufanelekanga. Ukuba udla njengesiqhelo, ungadli ukutya, ngoko unokutya kuphela igramu zomsebenzi wale mveliso ngosuku.
Ukuba ngokukhawuleza kufuneka ulahlekelwe isisindo, uze unamathele ekudleni kwizityalo ezomileyo.
Ubude balo bungabakho kwiintsuku ezingama-5. Ngoko awudli kuphela izithelo ezomileyo, kodwa kunye namantongomane, kuphela awanakunamanzi kwaye angabisiwe. Ngoko, kufuneka udibanise izithelo ezomileyo ngamanqatha uze uwapake kwii-sachets eziyi-100 amagremu. Kufuneka ube neepakethi ezintlanu. Ngoku ufanele uqonde ukuba ipakethi ye-1 kukutya kwakho ngosuku. Ukutshintshisa inkqubo enjalo ngombono ongenabuhlungu kwaye kulula, ukwahlula umthamo wakho wemihla ngemihla ye-10.
Ngokutya okunjalo, akukho nto yokulamba, kuba ngokulinganayo kukho iyure phakathi kokutya, kwaye akunakwenzeka ukulamba ixesha elinjalo. Ungaphuza ikhofi, amanzi kunye neyeyi, kodwa ngaphandle kwekhilimu, ubisi kunye noshukela.
Kulo lonke ukutya, kufuneka udle zonke iintlobo zezithelo ezomileyo, zitshintshile zona, kuba ngamnye kubo ungumthombo ongapheliyo wezondlo.
Izondlo zenze uphando malunga nezinto ezininzi abafazi abazifunayo ngexesha lokutya. Bonke babesondele ngokumanyeneyo bathi umzimba ufuna kwaye ufuna ukuba mnandi.
Vumelana ukuba xa sibambelela kwinkqubo yokutya ekhethekileyo, sijonge ngomona ngabantu abadla ngokugqithiseleyo i-ayisikrimu kunye nemiqulu. Okwangoku, asinelisekile isidingo somzimba weswekile, uvakalelwa ngumsindo noxinzelelo. Ngoko ke, kufuneka usebenzise izithelo ezomileyo, ezilungele impilo yakho, kwaye uncede ekulahlekeni ubunzima.
Yintoni ekhethekileyo ngeziqhamo ezomileyo?
Azinalo idayi, izithako kunye nezinye iikhemikhali. Ngomzimba baya kwamkelwa kwaye bahambelaniswe-lo luyinzuzo ebalulekileyo. Eyona nto inomdla kukuba ukuba isiqhamo soma ngakumbi, siba luncedo ngakumbi. Ngokomzekelo, kwi-100 gram yamakhemikhali omisiwe kuninzi i-fructose kunye ne-glucose njengama-kilogram amane e-apricot.
Ngoku ke masithethe ngezityalo ezomileyo ngokwabo.
Le mveliso inefuthe elihle kwi-digestion, ngoko kunceda ukunciphisa umzimba. Inzuzo enkulu kunazo zonke zengqungquthela ezininzi zeefiber zondlo, ezizihlandlo eziliqela ziphucula umsebenzi wengxumbo. Oku kuthetha ukuba amafutha kunye nama-slags ayingozi aya kususwa ngokukhawuleza emzimbeni. Ukongezelela, ukuxhamla kwesi siqhamo somileyo kukuba kunokulwa nokudandatheka.
Abasetyhini emva kweminyaka engama-40 yamabhilikri omisiwe abaluleke kakhulu, kuba ukhusela amathambo kwi-osteoporosis. Ukongeza, i-apricot eyomileyo inceda abantu abanesifo sengqondo kunye nokunciphisa umzimba ngokuncedisa i-diuretics. Ezi zi yobungozi ziyingozi kumzimba kuba zihlamba inani elikhulu leetyuthi luncedo kumzimba. Yaye ukuba uthe wadla ama-apricot omisiwe, i-calcium yakho, i-magnesium ne-potassium iya kuzaliswa.
Le mveliso ayithandwa kakhulu ekudleni njengama-apricots omisiwe kunye neengcambu, kodwa akuthethi ukuba yimbi na. Imihla inomdla kakhulu, ngoko unokukunika umvakalelo wokukhawuleza ngokukhawuleza. Ukuba uyadla ukutya, uqaphela ukuba uyancipha amandla, uze udle ezininzi zezi zityalo ezomileyo. Zizityebi kwi-vitamin B5, ebuyisela amandla okusebenza kunye nokuphucula umsebenzi wengqondo. Ngaloo ndlela, unokubuyela kwakhona kwisisombululo semibandela yakho. Ukuba ungumntu osebenzayo okanye oshishino, sebenzisa imihla, baya kukunceda. Kufanelekile ukukhankanya ukuba amaYiputa awakha iipiramidi adle imihla, ngoko ungaqiniseki ukuba babuyisela ubuchule.
Ngokuqhelekileyo le mveliso ibizwa ngokuba yi-multivitamin eyomileyo. Kodwa kutheni? Yonke into yokuba ityebile kwiivithamini kunye nezinto ezilandelelanayo. Iyakwamkelwa kwizidlo ezininzi, kuba iqukethe iodine eninzi, kwaye iyadingeka ngumzimba ngokufanelekileyo nokusebenza kakuhle kwe-thyroid gland. Ngaphezu koko, iimvini zomeleza kwaye zivuselele iinwele.
Iipulole ezomileyo kunye namapheya
Ezi mveliso azifani nezobumnandi bazo, njengezinye izityalo ezomileyo, kodwa zifanelekile ukutya. Xa kuthelekiswa nezinye izityalo ezomileyo, zineenzuzo ezahlukileyo. Zikulungele ukulwa nokukhululeka, angabangeli ukungabikho komzimba kunye nokugatya umzimba. I-Fiber, ephakathi kwayo, isusa isinyithi esinzima emzimbeni, kwaye i-pectin iphucula imetabolism. Ii-apula kunye neepereyari kwifom yomisiwe, kunye nemini, iguqula kakuhle umsebenzi wengqondo. Oku kubangelwa ukuba baqulethe i-boron.
Ngoku kufuneka uxelele ukuba zeziphi izityalo ezomileyo ezifanelekileyo zokulahleka kwesisindo - indlela yokuzikhetha.
Musa ukuthenga i-aprikoti ebomileyo kakhulu, umbala we-orange uyingqangi, uthetha ukuba uphathwa ngekhemistry. Ngako oko, ama-apricot anjalo awanakukunceda, kuba asinayo iipropati ezifanelekileyo. Kungcono ukuthatha le mveliso yombala ophuzi obomvu. Dlula kwisiqhamo kunye nomnxeba, ukunambitha iwayini kunye nemveliso ebomile.
Kubalulekile ukugcina izityalo ezomileyo kwisikhwama esikhulu sempahla. Ngoko ke "abaxhamli" kwaye abayi kubola, oko kuya kwenzeka xa kugcinwa kwiingxowa zeplastiki. Khumbula ukuba ngaphambi kokuwasebenzisa ekudleni, kufuneka uhlambulule, kuba baphathwa ngesulfure okanye i-wax (ngoko bhetele bathuthwa kwaye bagcinwe). I-Wax ne-sulfuri ayiyi kukulimaza umzimba wakho kwaye ayiyi kukuchaphazela ukulahleka kwesisindo, kodwa ukuba kunokwenzeka, ungadli izinto ezingaphezulu.
Yileyo ndlela unokulahlekelwa ngayo isisindo ngokutya okumnandi. Ukuba awukwazi ukuhlala ngaphandle kokumnandi, kwaye kufuneka uhlawule ngokukhawuleza, ngoko uthenge ama-raisins, ama-apricot omisiwe, imihla, iifununu, ama-apula omisiwe kunye namapheya kwaye ukhule ungcolise ukuze ujonge.
Kutheni kutyiwa okungathandekiyo?
Ungadla njani ngokunyamezela?
I-Bruschetta kunye nemifino kunye noshizi yebhokhwe
I-Peach i-pebbler ene-vanilla
Abadlali bee-series of Return of Mukhtar
Sadibanisa i-sweater "I-Blue Dream"
Kutheni abesetyhini babonisa i-orgasm
Amanzi ashushu ebusika kunye nehlobo: ukuhamba nokugcina amanzi
Indlela yokulahlekelwa isisindo iintsuku ezintathu ngaphambi koNyaka omtsha: Ukutya okusebenzayo
Ndingayenza ntoni ukuba idolo livuvuke?
Iindlela zokupheka ezifanelekileyo nezisebenzayo zee-freckles
I-styre-fry yemifuno enomso neyomuncu